ပရိတ်သတ်တွေကြား ပြောစမှတ် တွင်နေတဲ့ သူမ ရဲ့ ချစ်သူ အကြောင်း ကို ပြန်လည် ဖြေရှင်း ခဲ့တဲ့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း – EverBestMM
ပရိတ်သတ်တွေကြား ပြောစမှတ် တွင်နေတဲ့ သူမ ရဲ့ ချစ်သူ အကြောင်း ကို ပြန်လည် ဖြေရှင်း ခဲ့တဲ့ ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မင်းသမီးချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ကတော့ ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး လက်ရှိမှာလည်း ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေသူပါ။ မိသားစုဝင်များကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အမွေတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မပြတ်ပြုလုပ်နေသူပါ။
ယနေ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ မှာတော့ မင်းသမီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ရဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုဖိုင်များ ကို မျှဝေခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ချစ်သူဟာ ဘယ်လိုလူပါလိမ့်ဆိုကာ ပရိတ်သတ်တွေက သိချင် နေခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် page ကနေပြီး အခုလိုပဲ သူမရဲ့ ချစ်သူအကြောင်း ကို ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး ဆောင်း အိနြေ္ဒထွန်း ဖြေရှင်းခဲ့ တာကတော့ ” မမဆောင်း ချစ်သူ က ဆရာဝန် လိုင်းရဒါ မယူတဲ့ စစ် အင်ဂျင်နီယာ ပါ. စစ်သားတွေ ရဲ့ ဘဝ ကြမ်းတမ်းလို့ စစ်အင်ဂျင်နေရာ က ထွက်ပြီး စီးပွားရေး လောက ထဲရောက်သွားဒါ. အရမ်းချမ်းသာ တဲ့ သူဌေး ပါ.နောကိတော့ ဘောလုံးအသင်း ဥကဠ လုပ်ဒယ်.” ဆိုကာ သူမရဲ့ ချစ်သူအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ပရိတျသတျတှကွေား ပွောစမှတျ တှငျနတေဲ့ သူမ ရဲ့ ခဈြသူ အကွောငျး ကို ပွနျလညျ ဖွရှေငျး ခဲ့တဲ့ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး
ပရိတျသတျ ကွီးရေ မငျးသမီးခြော ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ကတော့ ဇာတျကားပေါငျး မြားစှာမှာ ပါဝငျ သရုပျဆောငျထားပွီး လကျရှိမှာလညျး ပရိတျသတျခဈြ မငျးသမီး တဈယောကျ အနနေဲ့ ရပျတညျနသေူပါ။ မိသားစုဝငျမြားကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပွီး အမှတှေကေို တဈယောကျတညျး ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အလှူအတနျးမြားကို မပွတျပွုလုပျနသေူပါ။
ယနေ့ ဆိုရှယျ မီဒီယာ မှာတော့ မငျးသမီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ရဲ့ အငျတာဗြူး ဗီဒီယိုဖိုငျမြား ကို မြှဝခေဲ့ပွီး သူမရဲ့ ခဈြသူဟာ ဘယျလိုလူပါလိမျ့ဆိုကာ ပရိတျသတျတှကေ သိခငျြ နခေဲ့ကွပါတယျ။ အဆိုပါ ဖွဈရပျနဲ့ ပကျသကျပွီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ကတော့ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျ page ကနပွေီး အခုလိုပဲ သူမရဲ့ ခဈြသူအကွောငျး ကို ဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ။
မငျးသမီး ဆောငျး အိန်ဒွထှေနျး ဖွရှေငျးခဲ့ တာကတော့ ” မမဆောငျး ခဈြသူ က ဆရာဝနျ လိုငျးရဒါ မယူတဲ့ စဈ အငျဂငျြနီယာ ပါ. စဈသားတှေ ရဲ့ ဘဝ ကွမျးတမျးလို့ စဈအငျဂငျြနရော က ထှကျပွီး စီးပှားရေး လောက ထဲရောကျသှားဒါ. အရမျးခမျြးသာ တဲ့ သူဌေး ပါ.နောကိတော့ ဘောလုံးအသငျး ဥကဠ လုပျဒယျ.” ဆိုကာ သူမရဲ့ ခဈြသူအကွောငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သူမနဲ့ ပိုးအိအိခနျ့တို့ မိသားစုအကွား သတငျးမှားထှကျပျေါနမှေုကို ပွောလာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ကျွန်ေ တာ် တို့ အနုပညာ သမား တွေ အဲ့ဒီေ လာက် မရက်စက်တ တ် ပါဘူး လို့ပြောလာ ပြန်တဲ့ သရုပ်ဆောင် “မင်းရာဇာ”